ဂျော့ဘ် | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
TCDD işçi alımı için yaptığı sözlü sınavın sonucunu tam üç aydır açıklanmadı. TCDD işçi alımı mülakat sonuçlarının açıklanmayışı hakkındaki haberlerde; TCDD’nin yürütmekte olduğu işe alım süreci ile ilgili olarak sınav [ပို ... ]
TCDD YHT သည် Machinist ကိုငှားရမ်းမည်ဖြစ်သည် - TCDD သည် 262 ၀ န်ထမ်းခန့်အပ်မှုပြုလိမ့်မည်။ TCDD ၏ ၀ န်ထမ်းနေရာများကိုဖွင့်လှစ်ပြီး ၀ န်ထမ်းများဖြန့်ဝေမှုကို 5.Nov.2019 တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ တရားဝင်ပြန်တမ်းပြည်နယ်မီးရထားထဲမှာထုတ်ဝေဆုံးဖြတ်ချက်၌တည်၏ [ပို ... ]
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirket BURULAŞ, Bursa il sınırları içerisinde çeşitli hizmet noktalarındaki otopark alanlarında görevlendirmek üzere5daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda otopark alanlarında otopark görevlisi olarak [ပို ... ]
10 အမျိုးသမီးဘတ်စ်ကားမောင်းသူကို Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှုတွင်အလုပ်ခန့်ရန်ခေါ်ယူလိမ့်မည်။ •အနိမ့်ဆုံးအထက်တန်းကျောင်းပြီး3နှစ်ပေါင်းများစွာကားမောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ၊ [ပို ... ]
“Kadınlar kentte ve yönetimde sözü olacak” vaadini yaptığı atamalarla gün be gün gerçekleştiren Başkan Ekrem İmamoğlu, İETT’nin ihtiyaç duyduğu şoförlerin de kadınlardan seçilmesi talimatı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından [ပို ... ]
Teo နေဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကြေငြာချက်, အဆိုအရ TULOMSAS အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိဝန်ထမ်းများမရှိခြင်းအဘို့အမှတဆင့်ဝယ်ယူမှုစေမည်။ ဤတွင်အခြေအနေများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ 30 စက်တင်ဘာလ 2019 နေ့စွဲဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကြော်ငြာမှအဆိုအရ [ပို ... ]
အဆိုပါEskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ESTRAM5အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုကြေညာချက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပေါ် မူတည်. ။ စနစ်တွေထိန်းသိမ်းမှုပြင်ဆင်ခြင်းအချက်ပြ 1 တဦးတည်းရထားလမ်းအားဖြင့်ကြော်ငြာများသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှု၏4တဦးတည်းအလုပ်ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapmak üzere toplam 100 kadın personel alımı için ilana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadın personel alımı konusunda çalışmalarını başlattı. Başkan Seçer, “Mersin’in [ပို ... ]
Eskişehir Metropolitan မြူနီစီပယ်က 65 ယာဉ်မောင်းများ ၀ ယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၀ ယ်ခြင်းအခြေအနေနှင့်လျှောက်လွှာအခြေအနေများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတင်းမှလေ့လာနိုင်သည်။ Eskişehirမြူနီစီပယ်၏ Estram ရထားလမ်းစနစ်များသည် URKUR တွင်ထုတ်ပြန်ထားသောကြေငြာချက်များအသစ်တွင် [ပို ... ]
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကအလုပ်ခွင်ဟောင်း-ယုံကြည်စိတ်ချမှု၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်, မသန်မစွမ်းများနှင့်စက်လုပ်သမားအလုပ်သမားရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လျှောက်လွှာ၏ရလဒ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ မသန်စွမ်းအလုပ်သမားများ၏အလားအလာလျှောက်လွှာဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားအလုပ်သမားရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လျှောက်လွှာရလဒ်များအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ [ပို ... ]